Global Voices teny Malagasy » Holandy: Tafaray ireo vehivavy am-pielezana Amerikana Latina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Novambra 2018 15:27 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rincón Parra Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Amerika Latina, Eoropa Andrefana, Espaina, Holandy, Shily, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Tsidika, Vehivavy sy Miralenta
Nikarakara fihaonambe ho an'ireo vehivavy mpifindra monina Amerikana Latina sy Karaiba any Amsterdam ny fikambanana Eoropeanina DiasporaSolidaria.org , izay nifanakalozany hevitra toy ny zon'izy ireo, ny toetra miovaova amin'ny fianakaviana sy ny fandaniana (vola raisina). LA Ruta mitondra antsika lahatsary fohy  mandrakitra ny sasantsasany amin'ny zavatra niainan'izy ireo.
Nandritra ny hetsika, nandray anjara tamin'ny atrikasa samihafa ireo vehivavy. Tamin'ny voalohany, niady hevitra momba ny lahy sy ny vavy, ny fifindra-monina, ny fampandrosoana ary koa ny fiovan'ny zon'izy ireo na novaina araka ny sata vaovao mifehy ny fifindra-monina izy ireo. Tamin'ny atrikasa faharoa, niresaka momba ny fandaniam-bola izy ireo ary nanaiky ny filàna fanentanana momba ny anjara asan'ny vehivavy amin'ny fandefasana vola any amin'ny firenena misy azy ireo. Nandritra ny atrikasa farany, nifanakalo hevitra momba ireo rafi-pianakaviana vaovao natsangana noho ny fifindra-monina, sy ny maha-zava-dehibe an'i Amerika Latina noho izy nampitombo ny rafi-pianakaviana vaovao antsoina hoe “fianakaviana transnational” izy ireo, ary ny fomba tokony hiovan'ny lalàna momba ny fianakaviana sy ny zon'ny fianakaviana na mampifanaraka izany amin'ity toe-javatra vaovao ity.
Samy manana ny antony ireo vehivavy izay nandeha tamin'ilay fihaonana. Rehefa nohadihadiana tamin'ny lahatsary izy ireo, dia nitanisa antony vitsivitsy, toy ny filàna hampahafantatra ny tena, mba hifandray amin'ny hafa, mba hahafantatra sy hijery fomba vaovao izay hampifanarahana amin'ny kolontsaina vaovao kanefa tsy manadino ny kolontsain'izy ireo taloha.
Nokarakaraina tany Espaina ihany koa ny fivoriana hafa ho an'ny vehivavy Amerikana Latina mpifindra monina, aingam-panahy tamin'ny traikefa nahomby tamin'ny iray tao Holandy. Mamaritra ny vokatra mampientanentana ny Diaspora Solidari :
Ny fahagagana mahafinaritra dia ny nahita ireo vehivavy marobe izay nanolo-tena mafy tamin'ny fampivelarana ny hetsiky ny vehivavy mihanaka amin'ny faritra sy firenena maro.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/30/131241/
 LA Ruta mitondra antsika lahatsary fohy: http://laruta.nu/es/video/migrantes-latinas-se-organizan
 Diaspora Solidari: http://www.diasporasolidaria.org/archives/248